Nine Chilean passenger planes forced to land over phony bomb threats | Airport news
Ikhaya » izithuba » Iindaba zesikhululo senqwelomoya » Iinqwelomoya ezilithoba zabakhweli baseChile ezinyanzelwe ukuba zihlale emhlabeni ngenxa yezisongelo zebhombu
Iindaba zeenqwelo moya • Iindaba zesikhululo senqwelomoya • Iindaba zokuhamba eArgentina • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zokuhamba ngeshishini • Iindaba zokuhamba eChile • Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe • Iindaba zokuhamba ePeru • Safety • Ubunqolobi kunye nolwaphulo-mthetho kubahambi: • Iindaba zoKhenketho • Iindaba zothutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zokuHamba • Iindaba eziShukumayo
Iinqwelomoya ezilithoba zabakhweli baseChile ezinyanzelwe ukuba zihlale emhlabeni ngenxa yezisongelo zebhombu
Iinqwelomoya ezisithoba kwindawo yomoya yaseChile, ePeruvia naseArgentina kuye kwanyanzeleka ukuba bafike ngokungxamisekileyo ngenxa yentsongelo yebhombu.
Iinqwelomoya ezisithoba kwindawo yomoya yaseChile, ePeruvia naseArgentina kuye kwanyanzeleka ukuba bafike ngokungxamisekileyo ngenxa yokoyikisa ngebhombu, utshilo u-Chile.
Kwiinqwelomoya ezintlanu, ikomkhulu laseChile iSantiago yayiyindawo yemvelaphi okanye indawo ekuyiwa kuyo. Zingama-11 izoyikiso zebhombu ezenziweyo, kodwa abasemagunyeni babona ezimbini kwezi "ziyintsomi," njengoko zazinxulumene neenqwelo moya ezingasebenzi.
Amagosa asePeruvia aqinisekisile ukuba a Latam Airlines I-2369 esuka eLima, ePeru, eya eSantiago, eChile, yanyanzelwa ukuba ifike kwisikhululo seenqwelomoya ePisco, ePeru kwangoko ngoLwesine emva kwemini. Abasemagunyeni ePeruvia babefumene ingcebiso malunga nokuqhushumba kwebhombu koogxa babo baseChile.
Inqwelomoya eLatam eyi-433 isuka eMendoza, eChile yaya eSantiago yafuduswa kwindawo yokubaleka ngenxa yesinye isoyikiso sebhombu, ngelixa i-Latam flight 800, eyayivela eAuckland, eNew Zealand, yafika ngokungxamisekileyo apho yayisiya eSantiago.
Inqwelomoya eyayisuka eBuenos Aires isiya eChile yanyanzeleka ukuba ihlale kumbindi wedolophu yaseArgentina iMendoza ngaphambi kwentsimbi yesixhenxe ngolwesine. Isikhululo seenqwelomoya sakhutshwa saza savalwa, kwaye iinkonzo zongxamiseko ziphande ngesi sehlo.
I-Sky Airlines, inqwelomoya yesibini enkulu eChile ngasemva kweLamam, ubuncinci ubuncinci kwiindiza zayo. Inqwelomoya ye-Sky Airlines 543 yabanjwa kwisikhululo senqwelomoya iRosario eArgentina. Ngeli xesha, i-Sky flight 524 yemka eMendoza, eChile, kwaye yafika ngokungxamisekileyo eSantiago ngaphambi kokudlulela eRosario; kwaye i-Sky flight 162 yemka eSantiago, phambi kokuyalelwa ukuba babuyele emhlabeni.
Ezinye iinqwelomoya zaye zangcwatywa, kodwa abasemagunyeni kwezokubhabha eChile abanikanga zinkcukacha.
Emva kovavanyo, zonke iindiza zabhengezwa ukuba zingenazo iziqhushumbisi. Akukho lwazi lunikiweyo malunga nokuba ngubani owenze izoyikiso zebhombu, okanye ukuba akukho nxibelelwano phakathi kwabo. Kungokunje amapolisa azama ukulandela imvelaphi yawo.
"Sisoloko sinesuthikheyisi okanye ezimbini ezilahliweyo, yinto eqhelekileyo leyo," utshilo umphathi weChile yaseChile uVictor Villalobos Collao kwinkomfa yoonondaba kwisikhululo senqwelomoya saseSantiago, "Kodwa eli lityala elikhethekileyo."